အမေးအဖြေများ - AOLGA INDUSTRY LIMITED
Q1 မင်းကစက်ရုံလား၊ ကုန်သည်လား။
A. ကျွန်ုပ်တို့သည် R & D ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းနှင့် OEM နှင့် ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သောကိုယ်ပိုင်သတ္တုနှင့်ဆေးထိုးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Q2 မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
A.It သည်မော်ဒယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ အချို့ပစ္စည်းများသည် MOQ လိုအပ်ချက်မရှိသောကြောင့်အခြားမော်ဒယ်များသည် 500pcs, 1000pcs နှင့် 2000pcs အသီးသီး ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါinfo@aolga.hk အသေးစိတ်သိရန်
Q3 မင်းရဲ့ quotation sheet ကိုငါဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A. စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြန့်ဖြူးစျေးနှင့်လက်လီစျေး ၀ ယ်တို့ပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်းစနစ်ရှိသည်။